नेपाली बजारमा सुजुकी एक्सेस १२५
नेपाली बजारमा सुजुकी एक्सेस १२५	By नवीन सन्देश on	१५ भाद्र २०७३, बुधबार १०:४९
काठमाडौँ । विशाल गु्रप अन्तर्गत भी. जी. अटोमोबाइल्सले भृकुटीमण्डपमा भइरहेको नाडा अटो शोबाट सुजुकी एक्सेस १२५ स्कूटर नेपाली बजारमा ल्याएको छ । सुजुकी एक्सेस १२५ संशोधित भई नयाँ बनावटमा आएको छ ।
हेड ल्याम्पमा थ्रिडी लोगो रहेको र अगाडि १२ इन्चको टायर, एलइडी टेल ल्याम्प जस्ता विशेषताहरु थप गरिएको छ । नयाँ सुजुकी एक्सेस १२५ १८७० मिलिमिटर लम्बाई, ६५५ मिलिमिटर चौडाई, ११६० मिलिमिटर उचाईको छ भने यसको तौल १०२ के.जी. रहेको छ । यसमा फराकिलो सिट र इजी स्टार्ट सिस्टमजस्ता अन्य विशेषताहरु पनि रहेका छन् ।
यसले कम इन्धन खपत गर्नुका साथै यसको ६४ कि/लि माइलेज रहेको छ । स्कूटर हाल ४ विभिन्न रङ्गहरुमा उपलब्ध छन् । यसको बजार मूल्य रु. १,८९,९००/– रहेको छ ।